Soo gelitaanka Noorway – xeerka karantiilka iyo qaadista tijaabada - helsenorge.no
Soo gelitaanka Norway – xeerka karantiilka iyo qaadista tijaabada
Midabkee leeyahay waddanka aad ka imanayso
Yaa hadda soo geli kara Norway?
Is diiwaangelinta ka hor soo gelidda waddanka
Tijaabo qaadis ka horreysa xilliga soo gelitaanka waddanka
Karantiilka soo gelista waddanka
Waxa jira marar qofka shaqaynaya laga dhaafayo xeerka.
Soo gaabinta wakhtiga karantiilka
Hoteel karantiil mise karantiilka soo gelidda waxa lagu galayaa guriga, ama meel kale oo ku habboon
Karantiilka safarka ee shaqaalaha iyo shaqaalaha waddanka degganayn
Weli waxa jira xayiraaddo adag oo khuseeya soo gelidda Norway.
Talooyinka safarka iyo xeerarka soo gelidda waddanku waxa ay yaraynaysaa halista ku saabsan in dad Norway deggan ay fayruska koroonaha ku soo qaadaan dibeddaha oo ay markaas cudurka keenaan waddanka.
Dawladda Norway waxa ay dadka kula talinaysaa in iska dhaafaan safarrada dibedda ee lagama maarmi karo. Talooyinka guud ee safarrada dibedduhu ma khuseeyaan EØS, Swiserland, Ingiriiska iyo waddamada ku jira liiska waddamada saddexaad ee FHI u arko in ay yihin waddamo ammaan ah (waddamada basaliga ah). Halkan ka akhriso faahfaahin ku saabsan talooyinka safarka ee Wasaaradda Arrimaha Dibeddu (regjeringen.no)
Ogow in xaaladda cudurka iyo xeerarka soo gelidda waddankuba isu beddeli karaan si degdeg ah.
Midabka waddanka aad ka imanayso ayaa go’aaminaya in aad gelayso karantiilka safarka iyo xeerarka ku khuseeya marka aad soo gelayso Norway.
Warbixinta midabyada khuseeya waddamada kala duwan ka eeg halkan (Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no)
Waxa aad Norway soo geli kartaa haddii aad tahay:
Muwaadin noorwiiji ah (macno ma leh waddanka aad deggan tahay)
Ajnebi deggan Norway
Ajnebiga deggan waddan ama aag laga dhigay cagaar.
Ajnebiga haysta shahaado koroone oo yurubiyaan ah oo lagu isticmaali karo Norway, oo muujinaysa in qofku si buuxda u tallaalan yahay ama in covid-19 ku dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay.
Ajnebiga carruurtooda la yeelanaya kulan/is-arag lagu balamay ama la go’aamiyay
Ajnebiga maalintii ka yimaada Iswiidhan ama Finland si ay u aadaan xannaano, dugsi hoose/dhexe, dugsi sare ama shaqo.
Carruurta ama ardayda maalintii ka timaada Iswiidhan ama Finland ee yimaada xannaano carruureed, dugsi hoose/dhexe ama dugsi sare. Dadka wada gaadiidka carruurta geynaya/kaxaynaya guriga iyo xannaanada ama iskuulka ayaa iyagana laga dhaafay xeerkan.
qof ehel dhow yihiin dad deggan Norway:
Xaas/sey, lammaane diiwaangashan ama qof lala noolyahay
Carruur la dhalay ama waalidkood nolol lala wadaago oo da’yar ah
Waalidka carruur da’yar ah ama qofka ay waalidkaas nolosha wadaagaan
Waalidka carruurta waaweyn
Waalidka waalidiinta (ayeeyo/awoowe)
Carruurta loo yahay ayeeyo/awoowe
ajnebiga deggan waddamada saddexaad ee qaraabo dhow la ah dad deggan Norway:
qof aad nolosha wadaagtaan oo aad wada noolaydeen ugu yaraan labo sanno, ama aad sugaysaan ilmo dhalanaya ama ilmo isu leh
carruurta ka yar 18 sanno
waalidkaaga haddii aad ka yar tahay 18 sanno
Dadka saxiib/saaxiibad ku leh waddanka ee deggan EØS, Iswiserland, Ingiriiska iyo waddamada basaliga ah, iyo carruurtooda ka yar 18 sanno. Dadkaasi waa in UDI ka codsadaan in ay waddanka soo geli karaan. Macluumaad iyo foomka codsiga ee UDI waxaad ka helaysaa halkan Application for boyfriend/girlfriend visits - UDI.
Eeg barta UDI si aad u hesho liis dhammaystiran oo ka kooban dadka xeerka laga dhaafayo iyo macluumaad kale oo ku saabsan soo gelidda Norway.
Ma soo geli kartid Norway haddii aad tahay:
qof dalxiis ah
qof deggan Midowga Yurub/EØS (ku jiraan dadka deggan waddamada Noordiga) ee ka shaqaynaya ama wax ku baranaya Norway, ee aan ku jirin dadka xeerka laga dhaafay.
dadka hawlo ganacsi u socda.
qof ajnabi ah oo la siiyey fiisaha waddamada Schengen, oo aan ku jirin dadka xeerka laga dhaafay
dadka guri-fasaxeed ku leh Norway, laakiin aan degganayn.
Qofka loo oggol yaha in uu Norway soo galo waa in uu caadi ahaan sameeyo arrimahan:
Waa in aad buuxiso foomka diiwaangelinta safarka ka hor intaanad soo bixin
Waa in aad wadato shahaado cadaynaysa in lagaa waayey koroonada, iyadoo tijaabada la qaaday xilli ka mid ah 24-kii saacadood ee ka horeeyey xilliga aad imanayso
Waa in aad tijaabo iska qaado marka aad timaado Norway
Waa in aad Norway ku gasho karantiil 10 maalmood ah kaddib marka aad waddanka timaado.
Ku xadgudubka xeerarka soo gelidda waddanku waa dembi ciqaab lagu mutaysan karo.
Qof kasta oo soo gelaya Norway waa inuu buuxiyo foomka soo gelitaanka. Diiwaangelinta dhijitaalka ah kadib waxaad helaysaa rasiidh aad booliska tusayso markaad timaado.
Waa inaad is diiwaangeliso ka hor intaanad iman Norway, laakiin ma ka horayn karto xilliga ku beegan 72 sacadood ka hor soo wakhtiga gelitaanka.
Dadka si buuxda u tallaallan ama covid-19 ku dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay waa laga dhaafay shuruudkan oo markaa ma u baahna in ay buuxiyaan foomka. Dadkani waa in ay caddeeyaan in ay si buuxda u tallaallan yihiin ama in covid-19 ku dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay iyagoo isticmaalaya shahaadada koroonaha ee noorwiijiga, iswiidhishka ama daanishka ah (ee ku jirta helsenorge.no).
Sidee la isu diiwaangeliyaa?
Gal diiwaangelinta soo gelitaanka ee dhijitaalka ah (entrynorway.no)
Waxa aad wixi kartaa ringe +47 33 41 28 70 oo kaa caawin kara buuxinta foomka. Ama e-boos u dir support@entrynorway.no.
Telefoonkani wuu furan yahay saacad kasta maalin kasta. Xilliyada u dhexeeya 08:00-22:00 waxa la heli karaa tilmaamo lagu bixinayo afafka boolishka, ruushka, litweyniga iyo romaaniyaanka.
Karantiilka iyo tijaabo-qaadista Norway: Eeg xeerarka ku khuseeya (Helsedirektoratet.no)
Shahaado tijaabo covid-19 ah oo cudurka laga waayey
Dadka Norway imanaya waa in ay soo bandhigaan tijaabo cudurka laga waayey ka hor inta aanay soo gelin waddanka. Shuruudkan waxa lagu xidhayaa xataa muwaadiniinta Norway iyo dadka deggan Norway.
Waa in tijaabada la qaaday xilli ka mid ah 24-kii sacadood ee ka horeeyey wakhtiga imaanshaha Norway
Habka tijaabada ee la oggol yahay waa PCR ama tijaabada degdega ah ee antigen
Shahaadadu waa inay ku qornaato noorweyji, iswiidhish, dheenish, ingiriisi, faransiis ama jarmal
Haddii aad diyaarad ku imanayso, waxaad tijaabada iska qaadi kartaa xilli ka mid ah 24-kii sacadood ee ka horeeyey wakhtiga lagu talogalay in diyaaradaada u horaysaa kacdo.
Dadkan hoos ku xusan ma u baahna inay soo bandhigaan shahaado caddaynaysa in koroona laga waayey marka ay yimaadaan Norway:
Dadka si buuxda u tallaallan ama uu covid-19 ku dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay islamarkaana arrintaas caddayn kara iyagoo isticmaalaya shahaadada koroonaha ee noorwiijiga, iswiidhishka ama daanishka ah (ku jirta helsenorge.no)
Socdaalka ka imanaya waddamo/aagag karantiilku waajib ku ahayn qofkii ka yimaada
Carruurta ka yar 12 sanno jir
Ajnabiga si aad ah loogu baahan yahay si loo sii wadi karo hawlaha aad ugu muhiim ah bulshada ama lagu ilaalinayo baahiyaha asaasiga ah ee dadweynaha, taas oo halis ku keenaysa nafta iyo caafimaadka dadweynaha haddii loo diido soo gelitaanka.
Ajnabiga hakad safar diyaaradeed ku jira (taraansit ah)
Ajnabiga si joogto ah u yimaada Norway ee Iswiidhan ama Fiinland uga yimaada shaqo ama waxbarasho darteed, ee in ka badan toddoba maalmo ka maqnaa Norway. Shaqaalaha caafimaadka ee ka imanaya Iswiidhan iyo Finland waxa lagu xidhayaa shuruudo gaar ah oo ku saabsan shahaadada tijaabada.
Magangelyo-dooneyaasha iyo qaxootiga la soo qaatay
Ajnabiga Norway ku leh sharci joogitaan oo ku salaysan midayn-qoys
Dadka ku jira hawlaha diblomaasiyadda, arrimaha dibedda ama hawlaha qunsuliyadaha iyo safaaradaha
Ajnabiga ka shaqaynaya gaadiidka wada badeecadaha iyo dadka, ama ku socda ama ka soo socda hawl noocaas ah
Duuliyeyaasha ama shaqaalaha badda ee ku socda ama ka soo socda hawl noocaas ah
Dadka maalintii ka soo shaqo taga Iswiidhan ama Finland ee tijaabada fayrusta koroonada laga qaado maalin kasta oo 7-aad oo isla markaana caddayn kara arrintaas.
Dadka si joogto ah u deggan Svalbard
Boolis ka yimi Iswiidhan ama Finland oo taraansit ah, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha kastamada Iswiidhan iyo Finland ee shaqada ku jira
Tijaabo-qaadista waajibka ah xilliga soo gelitaanka
Caddaynta lagaa rabo ee ku saabsan in waayey cudurka lagaa waayey ka hor intaanad u soo safrin Norway, waxa dheer oo lagaa rabaa in aad tijaabada covid-19 iska qaado isla marka aad timaado Norway. Xarummo lagu qaado tijaabooyinka ayaa ku yaalla xuduudda, Waxa kugu waajib ah in aad goobta joogto ilaa inta aad helayso jawaabta tijaabada. Haddii jawaabtu ay sheegto in cudurka lagaa helay waa in aad tijaabo PCR ah iska qaadid 24 saacadood gudahood,laakiin haddii aad joogtay meel ka baxsan Aagga Dhaqaale ee Yurub iyo Aagga Schengen, xilli ka mid ah 10-kii maalmo ee u dambeeyey waa in aad goobtada iskaga qaado tijaabo PCR ah.
Xataa carruurta ka yar 12 sanno jir waa in laga qaado tijaabada, laakiin haddii ay adkaato in tijaabo laga qaado ilmaha oo uu tusaale ahaan diido, waa in aan laga qaadin tijaabo.
Waxa lagu siin doonaa ciqaab ganaax lacageed ah haddii adiga oo aan haysan sabab macquul aad diido iska qaadista tijaabada marka aad timaado, islamarkaana iskaa uga bixi weydo Norway.
Shardiga ah in tijaabo la iskaga qaado xuduudda waxa laga dhaafay dadka qaar, waxaana ka mid ah:
Dadka si buuxda u tallaallan ama covid-19 ku dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay islamarkaana caddayn kara iyagoo isticmaalaya QR-ka ku yaalla shahaadada koroonaha.
Dadka karantiilka laga dhaafay saacadaga shaqaqa ama wakhtiga firaaqaha ah
Dadka si joogto ah uga yimaada Iswiidhan ama Finland si u shaqeeyaan ama u aadaan iskuul, waa laga dhaafay karantiilka.
Darawallada gaadiidka masaafada fog wax geeya iyo shaqaalaha tareenka ee aan ka shaqayn tareen-badeecadeedka.
Dadka si aad ah loogu baahan yahay si loo sii wadi karo hawlaha aad ugu muhiim ah bulshada ama lagu ilaalinayo baahiyaha asaasiga ah ee dadweynaha, marka ay adag tahay in la qaado tijaabo.
Qofk kasta oo Norway soo gelaya isagoo ka yimi waddamada ama aagagga casaanka ah, waa inuu caadi ahaan galo 10 maalmood oo karantiil ah oo laga bilaabayo maalinta uu soo galay Norway. Waxa loo yaqaanaa karantiilka safarka.
Dadka si buuxda u tallaallan ama covid-19 ku dhacay iyo dadka ka imanaya waddamada ama aagagga cagaarka ah waxa laga dhaafay karantiilka safarka. Waa in aad arrintaas caddayn kartid adiga oo isticmaalaya shahaadada koroonaha ee Norway ee ku jirta helsenorge.no.
Meesha aad joogaysid xilliga karantiilka waxa ay ku xidhan tahay waddanka ama aagga aad ka timi marka aad Norway soo gelayso.
Qariirada waddamada/aagaga cas iyo kuwa huruuda ah ee Yurub (af-ingiriisi keliya)
Sidee loo galaa karantiilka safarka
Haddii aad ku jirto karantiilka safarka, waa in aad:
Joogtid hoteel karantiil ama meel kale oo habboon haddii lagaa dhaafay.
Aadin shaqo, iskuul ama xannaano carruureed.
Aadin safar waddanka gudahiisa ah.
Aadin meelo ay adag tahay in dadka kale laga fogaado inta loo baahan yahay.
Raacin gaadiidka dadweynaha. Dadka ka yimaada EØS, Iswiserland ama Ingiriisku waxa ay gaadiidka dadweynaha u raaci karaan goobta karantiilka, ama marka laga noqonayo Norway ka hor intaan karantiilku dhammaanin. Dadka ka weyn 12 sanno waa in ay isticmaalaan af-dabool.
Aadin meelaha dadka ka dhexeeya, sida dukaannada, farmasiiga ama maqaaxiyaha. Haddii aad xal kale weydo, waad aadi kartaa dukaan ama farmasii marka ay lagama maarmaan tahay. In wacan ka fogow dadka kale.
Iska dhaaf booqashooyinka. Carruurtu lama ciyaari karto carruur aan guriga la degganayn.
Waad aadi kartaa socod lug ah, laakiin in wacan ka fogow dadka kale. Waxa wacan in carruurta iyo dhallinyaradu ku ciyaari karto dibedda.
Haddii aad isku aragtid calaamada covid-19 marka aad ku jirto karantiil, waa inaad gooni uga baxdid dadka kale (isolasjon) oo aad wacdo adeega/goob-caafimaadeedka kuu dhow si aad isaga qaado tijaabo. Telefoonka la wacayo waa 116117.
Dadka laga dhaafay karantiilka soo gelidda waddanka
Dadkan/ xaaladahan ayaa laga dhaafayaa karantiilka soo gelidda waddanka:
Dhammaan dadka ka imanaya waddamada cagaarka ah.
Dadka si buuxda u tallaallan ama covid-19 ku dhacay. Waxa la mid ah socdaalka wata shahaado koroona oo daanish ama iswiidhish.
Xiriir dhexmaraya waalid iyo carruurtooda ama carruurta marba hal waalid la deggan
Dayactirka lagama maarmaanka ah iyo kormeerka guriga/dhisme ku yaalla Iswiidhan ama Finland
Cudur daran oo ku dhacay ama aaska qof ehel ah dhow ah
Dadkan hoos ku qoran ayaa laga dhaafay karantiilka safarka xilliyada saacadaha shaqada iyo wakhtiga firaaqada:
dadka Norway soo gala iyagoo soo maray aag karantiilku waajib noqonayo ee aan isticmaalin gaadiidka dadweynaha, u dhixin meesha islamarkaana aan u dhawaan dad kale oo aan ahayn kuwa ay la deggan yihiin.
dadka Norway soo gala kaddib markii ay dayactir iyo kormeer lagama maarmaan ah ku soo sameeyeen dhismo, doon, baabuur-guriyeed iyo waxyaalo la mid ah oo ku yaalla Iswiidhan iyo Finland, iyaga oo aan isticmaalin gaadiidka dadweynaha, u dhixin meesha islamarkaana aan u dhawaan dad kale oo aan ahayn kuwa ay la deggan yihiin.
dadka kora doon joogta Norway oo doonta aan ka bixin ilaa inta ay Norway ku soo laabanayaan. Waa in aan rakaab kale ama shaqaale kale oo joogay berriga deked ku taalla waddan kale aanay soo korin doonta, marka laga reebo dadka ka shaqeeyaa gaadiidka badeecadaha haddii ay iska ilaalinayaan u dhawaanshaha rakaabka iyo shaqaalaha.
Shaqaalaha diyaaradaha iyo tareennada ee shaqadooda ka bilaabay Norway ee aada dibedda laakiin aan ka bixin diyaaradda ama tareenka. Haddii aad ka baxdid diyaaradda ama tareenka waa in tijaabo lagaa qaado marka aad soo galayso Norway (shaqaalaha diyaaradaha), ama 24 saacadood gudahood (shaqaalaha tareennada), kaddibna waa in tijaabo lagaa qaado maalin kasta oo 7-aad.
Qof kasta oo ku jira karantiilka soo gelista waddanku waa in uu tijaabo PCR ah iska qaado marka toddoba maalmo ka soo wareegto imaanshaha. La xidhiidh degmada ama xarunta tijaabada si loo qaado tijaabadaas. Waa in ay degmadu fursad ku siiso in aad iska qaado tijaabada marka aad deggan tahay hoteel karantiil. Waajibaadka karantiilku wuu ku saaran yahay ilaa tijaabada lagaa qaaday ay sheegayso in lagaa waayey cudurka
Dadka difaacan kaddib markii ay qaateen hal cirbad oo tallaalka ah iyo carruurta ka yar 12 sanno waxa haddii laga waayo cudurka ka bixi karaan karantiilka soo gelidda saddex maalmo kaddib halkii ay ahaan jirtay toddoba maalmo. Waa in la cadeeyo in la difaacan yahay inta la galo Helsenorge.no kaddibna soo saaro QR-ta shahaadada koroonaha.
Dadka difaacan waxa looga jeeda:
Dadka tallaalka loo dhammeeyay
Dadka qaatay cirbadda hore ee tallaalka in ka badan 3 toddobaad ka hor
Dadka uu Covid-19 ku dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay
Meesha aad ku gelaysid karantiilka soo gelidda waddanku waxa ay ku xidhan tahay waddanka ama aagga aad ka timi markaad soo galayso Norway. Waa lagaa dhaafi karaa karantiilka hoteelka haddii aad ka mid tahay dadka kor lagu soo sheegay, haddii ay ku haystaan xaaladdo nololeed oo waaweyni ama haddii shaqo-bixiyihu kuu sii diyaariyay meel aad joogto oo hore loo sii oggolaaday.
Dadka ehelka isu dhow ah (xaas, dadka waxa nool iyo carruurtooda), ee wada deggan waddankooda hooyo oo safar ku wada imanaya Norway, waxay karantiilka soo gelitaanka ku wada geli karaan isla ah meel.
Waddamada ka baxsan EØS iyo Iswiserland
Haddii aad joogtay waddan ka baxsan EØS iyo Iswiserland 10-kii maalmood ee u dambeeyay ka hor soo gelidda Norway, waa in aad qayb ka mid ah karantiilka safarka ku qaadatid hoteel karantiil. Waa in aad joogtid hoteel karantiil ilaa inta aad iska qaadayso tijaabo PCR ah oo laga waayey cudurka oo la qaaday ugu horreyn markii ay saddex maalmo ka soo wareegtay soo gelistii waddanka. Haddii cudurka lagaa waayo waad bixi kartaa, waxaanad karantiilka safarka ku dhammaysan kartaa gurigaaga ama meel kale oo joogitaan ku haboon. Meeshu waxay joogitaan ku habboon tahay haddii laga fogaan karo dadka kale oo la haysto qol gaar ah, suuli gaar ah iyo kijin gaar ah ama cunto qofka loo keenayo.
Waddamada ku yaalla EØS iyo Iswiserland
Haddii aad joogtay EØS ama Iswiserland ma u baahnid inaad joogtid hoteel karantiil. Waa in aad xilliga soo gelidda waddanka caddayn kartid in aanad joogin waddan ka baxsan EØS iyo Swiserland xilli ka mid ah 10-kii maalmood ee u dambeeyay ka hor intaanad soo gelin Norway. Waa inaad leedahay guri ama meel kale oo joogitaan ku haboon oo laga fogaan karo dadka kale oo la haysto qol gaar ah, suuli gaar ah iyo kijin gaar ah ama cunto qofka loo keenayo.
Gaar u ah Ingiriiska
Laga bilaabo 21-ka Juun waxa dadka ka imanaya Ingiriiska waajib ku noqonaya hoteel karantiil.
Marka aad soo gasho Norway waa inaad caadi ahaan gashid hoteel karantiil. Haddii lagaa dhaafay waa in aad caadi ahaan soo bandhigtid waxa caddaynaya arrintaas marka aad soo gelayso waddanka. Macluumaad ku saabsan karantiilka lagu galo hoteel waxa ku siin kara booliska jooga meelaha laga soo talaabo xuduuda iyo baraha laga soo galo Norway.
Waa in aad iska bixiso lacagta hoteelka. Waa in aad halkaas joogto ugu yaraan toddoba maalmo. Maalinta 3-aad waxaad iska qaadi kartaa tijaabada covid-19 oo cusub. Haddii tijaabadaasi sheegto in lagaa waayey cudurka waad ka bixi kartaa karantiilka.
Carruurta da’yarta ah ee keligood yimaada Norway, waa laga dhaafay hoteel karantiil.
Kharashka joogitaanka hoteelka karantiilka
Qaybta la iska bixinayo lacagta hoteelka karantiilku waa 500 NOK oo maalintii oo laga rabo qofka shakhsiga ah ee ka weyn 18 sanno jir iyo shaqo-bixiyeyaasha. Carruurta ka yar 10 sanno jir ee qol deggan waalidkooda waa u bilaash. Carruurta u dhaxaysa 10 ilaa 18 sanno jir waxa qaybtoodu tahay 250 NOK maalintii. Qaybta lacagta ee la iska bixinayo waxa lagu bixinayaa hoteelka karantiilka.
Hoteelada karantiilka waxa laga helaa tijaabooyinka covid-19 oo bilaash ah.
Dadkan ayaa laga dhaafay hoteel karantiil
Dadka qaar ayaa codsan kara in laga dhaafo hoteelka karantiilka. Xeerarka ku saabsan qofka codsan kara, waxa aad ka helaysaa bogga internetka ee Hay’adda Agaasinka Arrimaha Ajnebiga About the corona situation - UDI.
In lagaa dhaafo ka codso cinwaankan https://www.udi.no/en/quarantine-hotel
Inkastoo laga dhaafay hoteel karantiil, waa in aad ku dhaqantid xeerarka karantiilka, tijaabo-qaadista iyo diiwaangelinta marka aad soo gelaysid Norway.
Karantiilka safarka waxaad ku qaadan kartaa gurigaaga ama meel kale oo joogitaan ku habboon haddii aad ka mid tahay dadkan:
Waxaad ka timi waddan ku yaalla EØS ama Iswiserland.
Adiga oo isticmaalaya helsenorge.no aad caddayn kartid in aad difaacan tahay oo haysatid guri ama meel kale oo joogitaan ku haboon oo laga fogaan karo dadka kale oo la haysto qol gaar ah, suuli gaar ah iyo kijin gaar ah ama cunto qofka loo keenayo.
Carruurta da’yarta ah.
Haddii aad caddayn kartid in shaqo-bixiyuhu uu Hay’adda koreerka shaqooyinka ka helay oggolaanaha goob joogitaan. Arrintan waxaad tusaale ahaan ku caddayn kartaa koobiga oggolaanshaha.
Waxaad caddayn kartaa in ay jiraan xaalado nololeed oo waaweyn ama sababo kale oo waaweynb (faahfaahin ka eeg hoos), waxaanad karantiilka ku qaadan kartaa meel kale oo joogis ku habboon, oo laga fogaan karo dadka kale. Waa in aad oggolaansho ka codsatid Hay’adda Agaasinka Arrimaha Ajnebiga (UDI).
Waxaad codsatay magangelyo ama waxaad tahay qaxooti la soo qaatay.
Waxaad waddanka u timi in aad ka qaygasho xidhiidh lagu balamay ama la go’aamiyay oo dhexmaraya waalid iyo carruur ama ilmo marba waalid la deggan oo ku salaysan xeerka carruurta iyo xeerka gaashaanka carruurta. Dadkani ma u baahna in ay UDI ka codsadaan in laga dhaafo hoteel karantiil.
Waxaad si joogto ah uga timaadaa Iswiidhan ama Finland si aad u shaqayso ama aad u aado iskuul, islamarkaana waxa lagaa dhaafay waajibaadka karantiilka iyadoo loo cuskaday qodobka § 6b ee xeer-hoosaadka covid-19.
Guriga mise meel kale oo joogitaan ku habboon
Meelahan ayaa la oggol yahay in ay karantiilka ku qaataan dadka laga dhaafay hoteel karantiil:
Guriga qofka ama meel kale oo joogitaan ku haboon oo laga fogaan karo dadka kale oo la haysto qol gaar ah, suuli gaar ah iyo kijin gaar ah ama cunto qofka loo keenayo. Goob kale oo haboon haddii aad marka aad soo gelayso cadayn karto in ay jiraan xaalado miisaan culus oo qasbaya in aad halkaas degto. Waa in aad cadayn karto in goobtu tahay meel ku haboon in lagu galo karantiilka. Hoosta liiskan ka eeg faahfaahin ku saabsan goob kale oo ku haboon karantiilka.
Meel ku haboon oo shaqo-bixiyuhu diyaariyey. Waa in shaqo-bixiyuhu marka hore loo oggolaanshaha goobta joogitaanka ka helo Hay’adda Kormeerka Goobaha Shaqada ka hor intaan shaqaaluhu soo gelin Norway. Waa in aad cadayn kartid in aad oggolaansho heshay marka aad soo gelayso waddanka.
Goob joogitaan ku haboon: Meesha joogitaan ku habboon waa meel ay suurtaggal u tahay in aan loo dhawaan dad kale, waa inuu jiro qol gaar ah, suuli u gaar ah, iyo jiko u gaar ah ama cunto loo keeni karo qofka.
Foomka diiwaangelinta safarka ee waajibka ah, waa inaad soo raacisid cadaynta ah in goobta joogitaanku buuxinayso shuruudaha ku gelitaanka karantiilka.
Xarunta qaranka ee hubinta dadka soo galay
Dadka Norway soo gala waxa muddada karantiilka la soo xidhiidhi doona Xarunta qaran ee hubinta dadka waddanka soo galay iyagoo isticmaalaya SMS iyo telefoon.
Haddii xarunta hubintu ku heli weydo, waxa arrintaas loo sheegi karaa dhaqtarka degmada ama Hay’adda Kormeerka Goobaha Shaqada.
Xarunta hubintu waxay macluumaadkaaga ka helaysaa diiwaanka dadka soo galay waddanka.
Waa muhiim in aad ka jawaabto marka lagaa soo wacao telefoonka 2189xxxx.
Shaqaalaha ajnabiga ah waa in ay, haddii aan hore loogu oggolaan meel kale oo ay joogi karaan, karantiilka ku galaan hoteel karantiil. Qof kasta oo soo gelaya Norway kana yimi waddamo karantiilku waajib noqonayo:
waa inuu galo karantiil ah 10 maalmood intaanu bilaabin shaqada
wuu soo gaabin karaa wakhtiga karantiilka haddii tijaabo kadib laga waayey fayrusta koroonada, sida kor lagu soo sheegay
Ka dhaafitaanka khuseeya waqtiga shaqada ee dadka marar badan ka soo talaaba xuduudaha
Shaqaalaha caafimaad ee si buuxda loo talaalay, ee shaqqooyin aad u muhiim ah ka haya cisbitaallada ama adeegyada caafimaad ee degmo, waxa laga dhaafaya in ay karantiil galaan wakhtiga shaqada haddii tijaabo ka-waayitaan noqota (negatiif) laga qaado markay soo galaan Norway.
Kuwo ka mid ah shaqaalaha darawaliinta ah ee masaafo fog wax geeya, shaqaalaha tareennada,shaqaalaha diyaaradaha iyo shaqaalaha gaadiid-badeed ka raacaya deked Norweyji ah si ay u shaqeeyaan waa laga dhaafi karaa karantiilka safarka xilliga waqtiga shaqada. Kuwaasi waa inay la hadlaan shaqo-bixiyahooda ay u ogaadaan nidaamka khuseeya iyaga.
Boolis ka yimi Iswiidhan ama Finland oo taraansit ah, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha kastamada Iswiidhan iyo Finland ee shaqada ku jira waa laga dhaafay karantiilka xilliga saacadaha shaqada
Shaqaalaha waddan kale deggan ee wax hal mar ka badan muddo ah 15 maalmo ka soo talaaba xuduuda Norway ee ka yimi Iswiidhan ama Finland waxa laga dhaafi karaa in ay karantiil galaan xilliga shaqaqa haddii ay tijaabo iska qaadaan;
ugu yaraan maalin kasta oo toddobaad
maalinta koowaad ee aad timaado Norway, kadibna maalin kasta oo toddobaad, haddii wax ka badan toddoba maalmo ka soo wareegeen markii tijaabo lagaaga qaaday Norway
toddoba maalmo gudahood kadib markii tijaabadii covid-19 la iskaga qaaday Iswiidhan ama Finland (waxay khuseysaa keliya ajnabiga deggan waddan kale)
Ma heli kartid ka-dhaafitaan haddii aad soo joogtay waddan aan ahayn Iswiidhan ama Finland xilli ka mid ah 10 maalmood ee ka horeeyey imaanshaha Norway, ama haddii aad isla markaasna ka soo shaqaysay goobaha adeegyada c.aafimaadka ee Iswiidhan ama Finland.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso halkan (af-ingiriisi keliya)
Ka-dhaafitaanka karantiilka soo gelitaanka markay jiraan waxyaalo ay ka mid yihiin xaaladdo nololeed oo waaweyn iyo arrimo saamayn ku yeelan kara karantiilka soo gelidda
Mararka qaarkood ayaa lagaa dhaafi karaa shuruudka ku saabsan karantiilka soo gelitaanka waddanka:
Si loo booqdo ehel dhow oo aad u buka ama ka qaybgalayo aaska qof u dhow. Ka dhaafitaanka karantiilku waxay khuseysaa keliya wakhtiga/saacadda la booqanayo bukaanka ama laga qaybgalayo aas. Intaas kadib waxa ku waajiba ah karantiil. Ka dhaafitaankani waxa uu dhici karaa keliya marka tijaabo ka-waayitaan ah la iskaga qaaday xuduuda OO ay isla maalintaas dhacayaan booqashada ama aasku. Waa inaad adigu iska bixiso lacagta tijaabada markan oo kale.
Haddii aad haysato heshiis ku salaysan xeerka carruurta ama xeerka daryeelka carruurta oo xaq kuu siinaya in aad la joogto carruur:
ma lagaa dhaafi doono karantiilka soo gelitaanka marka aad soo gasho Norway, laakiin waxa la oggolyahay in carruurta lala joogo xilliga karantiilka. Waxa shuruud ah in tijaabo (PCR) la iska qaado maalinta 3-aad iyo maalinta 7-aad kaddib soo gelitaanka waddanka.
waxa lagaa dhaafi karaa karantiilka soo gelitaanka marka ay tahay saacadaha shaqada kaddib haddii aad waddanka dibeddisa u tagtay in aad isla joogitaan xuquuq ah la yeelatid carruur deggan dibedda. Arrintan waxaad samayn kataa keliya haddii tijaabo (PCR) oo ka waayitaan noqday lagaa qaaday ugu horayn maalinta 3-aad kadib marka aad timi Norway. Haddii aad shaqo ku haysan Norway, ma lagaa dhaafi doono karantiilka xilliga shaqada marka aad timaadid si aad ula joogtid carruur.
waxa ilmahaaga ka imanaya waddan kale kadib markii ay la soo joogeen waalidkooda waxa lagaa dhaafi karaa karantiilka marka ay tahay saacadaha iskuulka haddii tijaabo (PCR) oo ka waayitaan noqday lagaa qaaday ugu horayn maalinta 3-aad kadib marka la yimi Norway. Carruurta ka yar 12 sanno waa laga dhaafayaa karantiilka, xataa haddii aan laga qaadin tijaabada koroonada.
Haddii aad caddayn karto in aad xuduudda Norway uga soo gudbaysid in aad samayso la joog carruur oo lagu balamay ama la go’aammiyey kuna salaysan xeerka carruurta ama xeerka daryeelka carruurta, waxaad karantiilka ku qaadan kartaa meel ku habboon. Shardi maaha in meeshu lahaato qol, suuli ama jiko kuu gaar ah.
Haddii adoo lagaa dhaafay karantiil aad isku aragto calaamadaha Covid-19, ama dhakhtar kugu tuhmayo inaad qabto Covid-19, waa inaad gasho karantiil.
Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koroonaha oo ku qoran afaf kale (regjeringen.no)
Markii ugu dambaysay ee la cusbonisiiyay Arbaco, Bisha Todobaad 07, 2021